WAREYSIYO – Codkasoomaalida.com
Category: WAREYSIYO	Guddiga Doorashooyinka Guddoonka Baarlamaanka iyo Madaxweynaha oo la magacaabay (Dhegeyso)	Xildhibaanada Baarlamaanka dowladda Soomaaliya oo Maanta markale kulan ku yeeshay Magaalada Muqdisho ayaa waxa ay magacaabeen guddi ka shaqeyn doona doorashada gudoonka Baarlamaanka dowladda Soomaaliya.
Author adminPosted on January 1, 2017Categories Featured, WAREYSIYO, World	Baarlamaanka oo diiday miisaaniyad xukuumadda u gudbisay	Kalfadhiga Koowaad Kulankiisa Labaad ee Wadajir labada Aqal ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya oo ay Maanta ku yeesheen Xarunta Golaha Shacabka ee Muqdisho ayaa waxa ay kaga hadleyn arrimo dhowr ah.
Author adminPosted on December 31, 2016December 31, 2016Categories Featured, WARARKA, WAREYSIYO	Duqa Muqdisho oo calaancal ku raadinaya xuquuqdii G/Banaadir (Dhegeyso)	Gudoomiyaha Gobolka Banaadir Sheekh Yuusuf Xuseen Jimcaale oo maanta warbaahinta kula hadlay xarunta Dowladda Hoose ayaa si kulul uga hadlay in Magaalada Muqdisho laga qadiyo qeybsiga Aqalka Sare.
Sheekh Yuusuf Xuseen Jimcaale ayaa soo hadal qaaday hadii tirada xubnaha Aqalka Sare lagu kordhiyay tiro hor leh muhiimada in ay aheyd in Magaalada Muqdisho la siiyo sadkii ay ku laheyd, waxaana uu tilmaamay xubnaha Madasha Qaran in ay uga fadhiyaan in ay cadeeyaan xuquuqda Gobolka Banaadir.
Author adminPosted on December 25, 2016Categories WARARKA, WAREYSIYO	Midowga Yurub oo xafiis ka furanaya Muqdisho (Dhegeyso)	Kulan ku dhexmaray Wasaaradda Qorsheynta iyo Iskaashiga Caalamiga ah ee Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo Maamulka Gobolka Banaadir ayaa waxaa looga hadlay xafiis Midowga Yurub uu ka furanayo Magaalada Muqdisho.
Xafiiska Midowga Yurub uu ka furanayo Magaalada Muqdisho ayaa waxaa lagu hormarinayaa Mashaariicda uu ka fulinaayo Magaalada Muqdisho.
Agaasime ku xigeenka Wasaaradda Qorsheynta iyo Iskaashiga Caalamiga ah ee Dowladda Federaalka Soomaaliya Maxamed Daahir Faarax oo markii uu kulanka soo idlaaday warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu sheegay Mashruucan in uu yahay mid horey looga soo fuliyay Maamulada Galmudug iyo Koonfur Galbeed.
Author adminPosted on December 19, 2016Categories WARARKA, WAREYSIYO	Jen. Muungaab: “Dalka wuxuu u baahan yahay in hoggaanka sare isbeddel lagu sammeeyo” (Dhegeyso)	Wasiiru dowlaha Wasaarada Cadaaladda dowladda Soomaaliya Jen. Xasan maxamed Xuseen (Mungaab) ayaa sheegay in dalka uu u baahan yahay isbeddel ku saleysan hoggaanka sare ee dalka.
Mungaab ayaa sheegay in koox ay dalka qabsatay ,islamarkaana sanadihii lasoo dhaafay uusan gaarin dalka horumar la taaban karo. Sidoo kale wuxuu xusay in dalka uu ku jiro marxalad kala guur ah iyo firaaq dastuuri ah bacdamaa waqtigii dowladda uu dhammaaday bishii September ee aynu kasoo gudubnay.
Wasiiru dowlaha Wasaarada Cadaaladda ayaa sidoo kale sheegay in hadda ay jiraan Musharaxiin u taagan qabashada xilka Madaxtinimada Soomaaliya, kuwaa soo uu sheegay in ay u badan tahay in ay bedelaan hoggaanka ugu sarreeya dalka.
Author adminPosted on December 18, 2016Categories WARARKA, WAREYSIYO	Search for: